mairie-antananarivo – Fihaonana tamin’ireo mpivarotra antsahamamy sy ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana
administrateur 13 febroary 2018 Commentaires fermés
Nitsidika an’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana tato amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely androany 13 febroary ireo Solontenan’ny mpivarotra “pavillon” vaovao avy etsy Ambolonkandrina Antsahamamy boriboritany faharoa, izay nitokanan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny 19 janoary lasa. Tonga nitsidika sady niarahaba ny Ben’ny Tanàna noho ny fahatratrarana ny taona vaovao tratran’ny taona 2018 sy ny nisaotra ny Ben’ny Tanàna tamin’ny nahazoan’izy ireo tsena vaovao satria nametraka zavatra tsara ho an’ireo mpivarotra ny Ben’ny tanàna ary nahazo tombotsoa tamin’ny fiaraha-miasa tamin’ny Delegen’ny boriboritany faharoa ihany koa.
Nandritra izany ny fangatahan’izy ireo ny hamoronana zotra vaovao miditra mankany anatin’ny tsenan’ Antsahamamy mba handrisika ny mpividy eny an-toerana.Nangataka ny fampidirana jiro ao amin’ny tsena vaovao ihany koa izy ireo fa indrindra ny fanasiana ny “poste avancé ” sy toerana fidiovana ; Eo koa ny fanadioavana ny tanàna sy ny fanatsarana ny lakandrano.
Vonona hanampy ireo mpivarotra ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana ka hojerena manokana ireo fangatahana izay miantoka ny fandriam-pahalemana sy ny fahadiovana ka raisina an-tanana fandinihana ilay zotra vaovao sy ny fanatsarana ny lakandrano izay ifampiresahana amin’ny departemanta avy ato amin’ny kaominina misahana izany.Ny sisa kosa dia ankinina amin’ny Delegen’ny Boriboritany faharoa.